ဘယ်သူမှားလဲ ??? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဘယ်သူမှားလဲ ???
Posted by Moe Z on Aug 30, 2011 in Creative Writing, Critic, Drama, Essays.., Other - Non Channelized, Short Story, Think Different | 32 comments
“အေးကွာကျေးဇူးပဲညီလေး” စည်သူ့လက်ထဲ တစ်ထောင်တန်အချို့ ထည့်ပေးပြီးထွက်သွားသော ဧည့်သည် အားကြည့်ပြီး Norah နှင့် ကျွန်မပြိုင်တူမဲ့လိုက်မိပါသည်။ ပြီးမှသွားပြီ security camera ကိုမေ့သွားတယ်ဟု ညည်းမိတော့သည်။
ကျွန်မရဲ့အလုပ်က ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ Receptionist ပါ။ နံနက် ၆ နာရီမှ နေ့လည် ၁ နာရီအထိ ကျွန်မနှင့် အတူ Norah နှင့် စည်သူက တာဝန်ကျပါသည်။ ကျွန်မတို့ဟိုတယ်က သန့်ရှင်းရေးကို အထူးဂရုစိုက်ပါသည်။ ယခုလိုပြောရခြင်းမှာ ကျွန်မတည်းဖူးသော ဟိုတယ်တစ်ချို့မှာ service ကောင်းသော်လည်း သန့်ရှင်းရေးကို သိပ်ဂရုမစိုက်ကြပါ။ ဥပမာ- စောင်တွေ ခေါင်းအုံးတွေမှာ အနံ့အသက်ရှိနေတာမျိုး။ ထို့ကြောင့် ကျွန်မတို့ဟိုတယ်တွင် တည်းဖူးသောဧည့်သည်များမှာ နောက်ထပ်ပြန်လာသူများပါသည်။ ကျွန်မတို့ ဟိုတယ်တွင် အခန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်ရှိပါသည်။ ပုံမှန်တည်းနေကြဧည့်သည်များသောကြောင့် အခန်းများမှာ အမြဲတန်းပြည့်နေလေ့ရှိပါသည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းသည် နေ့စဉ်လူပေါင်းမြောက်များစွာကို ပြောဆိုဆက်ဆံနေရ သောကြောင့် လူတွေအကြောင်းကို တစ်နေရာတည်းတွင် အတော်အတန်သိနားလည်နိုင်သော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။
တည်းနေကြဧည့်သည်များထဲမှ ဦးအာကာတို့လင်မယားမှာ ကျွန်မတို့ဝန်ထမ်းများအားလုံးနှင့်ပင် ရင်းနှီးနေသူများဖြစ်ကြပါသည်။ နှစ်ယောက်စလုံးမှာ စီးပွားရေးသမားများ ဖြစ်ကြပြီး လူကြီးလူကောင်းပီသ သူများ ဖြစ်ကြပါသည်။ နှစ်ယောက်အတူလာသလို တစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်း တစ်ယောက်တည်း လာတတ်ပါသည်။ ယခုတစ်ခေါက်တွင် ဦးအာကာနှင့်အတူ သူ့အမျိုးသမီးမဟုတ်သည့် သူနှင့်အသက် ၁၅ နှစ်ကျော်ကွာသည့် (ကျွန်မတို့က မှတ်ပုံတင်ကြည့်ရသောကြောင့်) ကောင်မလေး တစ်ယောက်နှင့် အတူလာပါသည်။ နှစ်ယောက်ခန်းကို ခါတိုင်းလိုပင်ယူသွားပါသည်။ ကျွန်မတို့သတ်မှတ်ထား သော လူကြီးလူကောင်းဆိုသည်ကိုပြင်ရတော့မည်။
နောက်နေ့မနက်တွင် ဦးအာကာ၏အမျိုးသမီးရောက်လာပါသည်။ ဦးအာကာဒီမှာရှိသည်ကိုလည်း သိပုံမရပါ။ ကျွန်မတို့ဟိုတယ်တွင်လည်း အခန်းအားလုံးပြည့်နေပြီး ဦးအာကာတို့တည်းသည့်အခန်းနှင့် ကပ်ရပ်တစ်ခန်းသာလွတ်ပါတော့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ကျွန်မတို့မန်နေဂျာရောက်လာပြီး “အစ်မ တစ်ယောက်တည်းလား’’ ဟု နှုတ်ဆက်ရာ “ဟုတ်တယ် ကိုအာကာကနေပြည်တော်မှာလေ’’ ဟုပြောပါသည်။ စည်သူက ဦးအာကာကို ဖုန်းဆက်ပြီး သူ့အမျိုးသမီးရောက်နေတယ်၊ ကပ်ရပ်အခန်းမှာဟုသတင်းပေးလိုက်ရာ ထိုအချိန်မှစ၍ စည်သူမှာ ဦးအာကာအား သူ့အမျိုးသမီးအ၀င်အထွက်ကို စောင့်ကြည့်သတင်းပေးရသူ ဖြစ်သွားပါတော့သည်။ နောက်တစ်နေ့ တစ်ခြားအထပ်တွင် အခန်းလွတ်ရလျင်ရခြင်း သူတို့စုံတွဲအားပြောင်းပေးလိုက်ရပါ သည်။ သူ့အမျိုးသမီးမှာ ၂ ရက်သာနေပြီးပြန်သွားပါသည်။
ဒီနေရာမှာကျွန်မတို့ ဂိုဏ်းကွဲပါသည်။ Norah နှင့် ကျွန်မက ဦးအာကာနှင့်သူ့အမျိုးသမီးကို ထိပ်တိုက် ဆုံစေချင်သူတွေ ဖြစ်ကြပါသည်။ သူ့အမျိုးသမီးအားကိုယ်ချင်းစာသောစိတ်နှင့် ခံပြင်းသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မန်နေဂျာနှင့် စည်သူကတော့ သူတို့စုံတွဲအားအမျိုးသမီး မမြင်အောင်အပြည့်အ၀ကာကွယ် ပေးကြပါသည်။ သူတို့က အမျိုးသားများဖြစ်သောကြောင့်လားမသိ၊ စာဖတ်သူများကရော ဘယ်ဘက်ကပါလဲ။
ပထမဆုံး ပို့စ် မှာ ကတဲက မမန်းဖြစ်လို့ အခုမှ ပြောရတာပါ
မိုးစက် ဆိုတဲ့ ကိစ္စပါ လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ နှစ်လောက် က အသိတစ်ယောက်ရဲ့ ကလေး မွေးနေ့ ကိုသွားတယ် ကလေးနာမည်က “မိုးစက်ချစ်သူ” တဲ့ အဲဒီထဲက နာမည်လေး သဘောကျနေတာ သမီးလေး မွေးလာရင် အဲဒီနာမည် ပေးမယ်ပေါ့ တကယ်မွေးတော့ မပေးဖြစ်တော့ပြန်ဘူး
အခုတွေ့တော့ အဲဒီတုန်းက အကြောင်းလေး သတိရမိသေးတယ် တကယ်လှတဲ့ နာမည်လေးပါ..(လူလဲလှမှာပါနော)
အပေါ်က ပို့စ်ကို ပြောရရင် ယောင်္ကျားလုပ်ပေါက် မကြိုက်လို့ သူတို့ကို ပြသနာတက်စေချင်တာလား သူတို့ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို တည်တံ့စေချင်တာလား ပေါ် မူတည် ဆုံးဖြတ်ရမယ်ထင်တယ်
ပြသနာတက်စေချင်ရင်တော့ ထ်ိပ်တိုက်တွေ့ပေးလိုက်ပေါ့ မိန်းမက အကိုင်အတွယ် မတတ်ရင် တစ်ခါထဲ ကွဲသွားနိုင်တယ် ၊ အိမ်ထောင်ရေး တည်တံ့ဘို့ဆိုရင်တော့ မိန်းမကိုနောက်ပိုင်းမှ ပါးပါးလေး အသိပေး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ခိုင်းပေါ့ …:)
မန်နေဂျာနဲ့စည်သူဘက်က ပါပါတယ်..
အခုလို ရှန်တိန် လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် သူများမိသားစုလဲ ပြဿနာ ကြီးကြီးမားမား မရှိတော့ဘူး
အဲဒီအချိန်တွေ့ သွားရင် လုံးဝ အကြီးအကျယ်ရှော့တတ်နိုင်တယ်လေ..နောက်ဆုံးကွဲပြဲသွားမယ်..
အကြီးအကျယ်ဖြစ်သွားလျင်..မိန်းမဘက်က အများကြီး အရှုံးပေါ်နိုင်တယ်
အိမ်ရှင်မ လုပ်သူတွေ ကိုယ့်ယောက်ျား မဖောက်ပြန်အောင် ကျွမ်းကျင်လိမ္မာစွာ ကိုင်တွယ်၊ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်
ရန်ကုန်မှာ အဲလို သင်တန်းပေးတဲ့ (အမျိုးသမီးတွေပဲ )သီးသန့် သင်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုရှိတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်..
ကျုပ်တောင် အသက်အရွယ်အားဖြင့် ငယ်သေးပေမဲ့..စမောလ် လေးတွေမြင်လျင် မျက်စိကျချင်သလိုလို
Well , as per hotel rule , Manager need to protect his clients and prevent un -wanted problem.
In the other hand , as said above , မိန်းမကိုနောက်ပိုင်းမှ ပါးပါးလေး အသိပေး ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း လုပ်ခိုင်းပေါ့ …:)
အသာလုပ်ကြပါကွယ်တို့၊ ထိပ်တိုက်တွေ့ပေးလိုက်ရင် သူတို့အိမ်တောင်ရေး ပျက်စီးဘို့များပြီပေါ့။ သူတို့မှာ သားတွေ သမီးတွေရှိနေရင် ပိုဆိုးတာပေါ့။ ဟော်တယ်ဆိုကတည်းက ဒီလို ဟာတွေကို အနည်းနဲ့ အများကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို ၀င်မစွက်ဖက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းပါပဲ။ သူတို့ ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
security camera ကို အခု company တွေတော်တော်များများမှာ သုံးပါတယ်
၀န်ထမ်းတွေနဲ့ တခြားလုံခြုံရေးကိစ္စတွေအတွက် စောင့်ကြည့်ဖို့ပါ
မတပ်ရင်လည်း မဖြစ်တာတွေရှိတော့ အဲဒီကိစ္စ စဉ်းစားဖူးတယ်
ကြား ၃ ကြား မဝင်ကောင်းဘူး တဲ့… ဟိုကြားတစ်ခုပဲကောင်းတယ်…
အစာစားလို့ သွားကြားညပ်ရင် ထိုးတဲ့ သွားကြား…..
မန်နေဂျာနဲ့ စည်သူ ဘက်ကပါမှာပါ။
Cobra , May be it justastart . ပီးတော့အဖိုးကြီးကတစ်ယောက်တည်းတွဲနေတာလေ
တယောက်ပီးတယောက်တွဲနေတာမှမဟုတ်တာ။ How do you know ? Is it you ? , Ha ha . just joke.
မိန်းမဆိုတာမျိုးကလဲ ဒီလိုအငယ်အနှောင်းကိတ်စနဲ့ ပတ်သတ်လာရင် ပွဲကြမ်းမဲ့သူများတော့ ၂ဦး၂ဖက် အကျိုးနည်းမဲ့ကိတ်စမဖြစ်အောင် သွယ်ဝိုက်သောနည်းနဲ့ သတိပေးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ မပြောဘဲ ထားလိုက်လို့ အရှိန်လွန်ကုန်ရင်လဲ အိမ်ထောင်ကွဲတဲ့ အခြေအနေကိုဘဲရောက်မှာမို့လို့ပါ။ မိန်းမဘက်က ပါးနပ်ဖို့တော့လိုမှာပေါ့လေ။
ဟုတ်ပါတယ် ထိပ်တိုက်တွေ.စေချင်တာထက် တိုးတိုးတိတ်တိတ် ကျိတ်ပြီးအသိပေးတာပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
– The main duty of မန်နေဂျာ is ပြသနာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးရန်
If I were the owner of the hotel &
If one of my staff tell this matter to U Arr Karr’s wife,
then, I will ( on the spot ) sack this staff.
Moreover, this act is also against the privacy law.
– “မိန်းမကိုနောက်ပိုင်းမှ ပါးပါးလေး အသိပေး”
No, Why do we have to inform her ?
သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀ကို ၀င်မစွက်ဖက်တာက အကောင်းဆုံးနည်းပါပဲ။
ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မိလို့ရှိရင် သူတို့အိမ်ထောင်ရေး ကိုထိခိုက်စေနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဟော်တယ်လည်း ဖောက်သည်ကောင်း တဦး လျှော့သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးဟာ အကြမ်းနည်းသုံးရင် ပိုဆိုးသွားစေနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အကယ်၍ နောက်ဆုံးထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်စေချင်ရင်တောင်မှ အရင်ဆုံး သူ့အမျိုးသမီးကို ကြို အသိပေးပြီး သဘောထား တီးခေါက်ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စ တွေကမသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာက ပိုကောင်းနေတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့ကိစ္စကို သူတို့ဆန္ဒအတိုင်း သူ့ဟာသူရှင်းတာ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။
မိုးစက် အလုပ်လုပ်တဲ့ ဟိုတယ်ကို စုံစမ်းပြီး ရှောင်ကြနော် … အင်တာနက်ထဲမှာ နံမည်ကြီးသွားမယ် …
(မှတ်ချက်။ မုန့်လင်မယား သူများလုစားမည်စိုး၍) ….
ဟုတ်ပ ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဘယ်ဘက်ကမှ ၀င်မပါဘူး။ Foreign Resident ပြောတဲ့အတိုင်းဘဲ ကျွန်တော်သာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဝန်ထမ်းထဲက ဘယ်သူသွားပြောပြော ဒီလူ fire ဘဲ။
This has nothing to do with u (Moe Z, Norah, Sithu and Manager)
ဒီလိုအရေးအရာ မျိုးက ဖြေရှင်းဖို့ ရာအင်မတန် သိမ်မွေ့ ပါတယ်။ ဘယ်လိုဖြေရှင်းနည်းမျိုးမှ ကောင်းတယ်လို့ ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ကြမ်းလိုက်ရင် ကောင်းသွားတာရှိသလို၊ နုပြီးပညာရှိနည်းသုံးမှ အဆင်ပြေတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။ ဘယ်နည်းသုံးသုံးအဆင်မပြေတာမျိုးလည်း ရှိနေတာဘဲ။
သူအရှိန်နဲ့ သူလိမ့်ပြီး ရပ်သွားတာမျိုးလည်း ရှိသေးတယ်။ ကဲ ဘယ့်နှဲ့ လုပ်ကြမလဲ။
ဥပဒေနဲ့ လွတ်ကင်းရင်ဧည့်သည်က ဘာတွေ ဖြစ်နေဖြစ်နေ အဆင်ပြေအောင်းထားရမှာက ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ တာဝန်ပါ.. လူမှု့ရေးနဲ့ကြည့်ရင်လဲ ပြဿနာမဖြစ်စေချင်တော့ စည်သူ လုပ်ရပ်က မှန်ပါတယ်ပေါ့နော် …
ဒါနဲ့ security camera က အခန်းထဲမှာ မထားပါဘူးနော် ဟုတ်လား…..
ကျုပ်ကတော့ သဂျီးဒီကိစ္စမှာ ဘာမှဝင်မပြောဘဲ ငြိမ်နေတာ မင်္သကာဘူး…။ သူ့ကို စောင်းပြောတယ်များ ထင်နေလား မသိ..။ :cool:
ကျွန်မကတော့ ဘယ်ဘက်မှမပါဘူး။ ယောက်ျားလေးဘက်ကနေတဲ့သူလဲ မမှန်ဘူး။ မိန်းကလေးဘက်က တွေ့စေချင်သူလည်း ရှိတယ်ပြောလိုက်ရင် ရနေတာပဲဟာ။ မပြောပဲ တွေ့စေချင်တယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ…
နောက်တစ်ချက်က ဒီအမျိုးသမီးက သူ့ယောက်ျားအကြောင်း မသိဘူးလား။ သူက ယုံကြည်နေတာကို ယုံကြည်မှုကို အလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ယောက်ျားကရော ယောက်ျားကောင်းဟုတ်ရဲ့လား။ ဘာလို့ ကိုယ်ဖန်တီးထားတဲ့ဘ၀တွေကို မပျော်မွေ့ကြပဲ ခဏတာ သာယာတာကို တပ်မက်ကြတာလဲ။ ဒီလို လူမှုရေး ဖောက်ဖျက်တာတွေက ဒုနဲ့ဒေးရှိနေမှာလို့ မြင်မိပါတယ်။ ယောက်ျားတွေက ဆင်းရဲတဲ့ဒဏ်ကို ခံနိုင်ပေမယ့် ချမ်းသာတဲ့ဒဏ်ကို မခံနိုင်ကြတာ ဘာကြောင့်ပါလဲ။ ဘယ်သူမှ မမှားဘူး။ မြင်မိတဲ့သူသာ မှားတာ….
မိန်းမတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကြည့်လျှင် …. ကိုယ်ချင်းစာပြီး ခံပြင်းလို့ … ထိပ်တိုက်ဆုံစေချင်ပေမဲ့ …တစ်ခါတစ်လေ မိန်းမဖြစ်သူက သိလျှက်နဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ပြိုကွဲမှာစိုးလို့ … ကြိတ်ငြိမ်နေရတာမျိုးလည်း ရှိတတ်တယ်လေ … ။ မိုးဇက်က မိန်းမမို့လို့ ..ကိုယ်ချင်းစာတာ နားလည်ပါတယ် …(ကိုယ်ဆိုလည်း … ဖောက်ပြန်တဲ့လူကို သူ့မိန်းမနဲ့ တွေ့စေချင်မှာပါ .. ) သို့သော်လည်း အလုပ်ချိန်တွင်းမှာတော့ .. ဧည့်သည်တွေ အဆင်ပြေမှူကို ဦးစားပေးရမယ် ….. ။ ကိုယ့်ဆီလာတဲ့ အချိန် အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှူ အပြည့်ဝပေးရမှာလေ … ။ ကိုယ့်ပယောဂကြောင့် သိသွားတာမျိုးမဟုတ်လျှင်တော့ .. အကောင်းဆုံးပါ … ။
စည်သူကတော့ … ဧည့်သည်ကိုလိုအပ်တာထက် care လုပ်တာ ပိုနေတယ်ထင်ပါတယ် … ။ ကံတရားအရ အခန်းချင်း ကပ်လျှက်ကျပေမဲ့လည်း … ၀င်ချိန် ၊ ထွက်ချိန်ဆုံမှသာ တွေ့တတ်တာမို့ … အထူးတလည် သူ့မိန်းမဘေးခန်းမှာ ရှိနေကြောင်း သတင်းပေးစရာမလိုသလို … အ၀င်ထွက် စောင့်ကြည့်အချက်ပေးစရာမလိုပါဘူး … ။ ဟိုတယ်က လုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်ထဲ …. ဖောက်ပြန်မှူကို အားပေးတဲ့ အချက်မပါဘူး ထင်ပါရဲ့…. ။ ဘယ်ဧည့်သည် ဘယ်အခန်းတည်းတယ်ဆိုတာ(ရာဇ၀တ်မှုကလွဲလျှင်) … ဟိုတယ်က ပြောခွင့်မရှိပါဘူး … Traders Hotel မှာဆို …ဖုန်းလာလို့ လွှဲပေးလိုက်လျှင်တောင် အခန်းနံပါတ်ပေးမသိရဘူး … ။ Msg လား fax လား ..ချန်ခဲ့မလား ရတယ် သွားပြောပေးမယ်ဆိုတာချည်းပဲ … အခန်းနံပါတ်တောင်းတာ လုံးဝ secrect လုပ်ထားတယ်… ။ အဲ့ဒီလိုကို customer ရဲ့ ပရိုက်ဗိတ်ဆီကို care လုပ်တာ …. ။
ဒီကိစ္စမှာလည်း … ကံတရားအတိုင်း တွေ့ချင်လည်း တွေ့… လွဲချင်လည်း လွဲသွားပါစေလားနော် … ။ တော်တော်ရှည်တဲ့ စည်သူ …. တစ်ပ် ဘယ်လောက်ရလိုက်လဲမသိဘူး
ဒီလိုကိစ္စ မျိုးတွေ့တိုင်းသာ ၀င်ခံစားနေတတ်တယ်ဆိုရင် ဟော်တယ်မှာ အလုပ်မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါ တစ်ကယ့်အဖြစ်အပျက်ဆိုရင် ကိုယ့် customer ရဲ့ အတွင်းရေးကို အင်တာနက် ပေါ်တင်ပြီး မဆွေးနွေးသင့်ဘူးလို့ ကျွန်တော် ရိုးရိုးသားသား ထင်မြင်မိပါတယ်။
comment အားလုံးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကိစ္စပါ ။
မိုးစက်ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောပြတာပါ။ နာမည်လည်းပြောင်းထားပါတယ်။
ပြီးတော့ မိုးစက်ကလည်း ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းမဟုတ်ပါဘူး။
Black Chaw ကတော့ ရိုးသားစွာဝန်ခံသွားပါတယ်….. သူ ရိုးရိုးသားသား ဟိုတယ်ကိုကောင်မလေးခေါ်ပြီးတော့ သွားခဲ့တာပါတဲ့……… အင်တာနက်ပေါ်ထိ တင်ပြီးတော့ ဆွေးနွေးတဲ့အတွက် အဲ့ဒီ ဟိုတယ်မှာနောက်မတည်းတော့ဘူးလို့လဲ… စိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးတော့ တွေးလိုက်ပါပြီ…
customer relationship management ဘက်က၀င်မန့်ပါပီခည…
သူရို့ အိမ်ထောင်ရေး ကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားပါ…
လူမှုရေး ဖောက်ပြန်မှု ကျင့်ဝတ် ဒါတွေကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားပါ
စကီလေးတွေ ကိုလည်း စိတ်မ၀င်စားပါ…(ဒါတော့ အသံကောင်းဟစ်တာ..)
ယောက်ျားမို့ မိန်းမ မို့ ဟိုဘက်ရပ်တယ် သည်ဘက်ရပ်တယ် ဆိုတဲ့ sexual discrimination
ကိုလည်း ပိုတောင် စိတ်မ၀င်စားပါ…
ဘစ်ဇနက် အရပဲ ပြောကြချည်စို့ရဲ့…
ကစည်သူနဲ့ ဂျာကြီး မှန်ပါတယ်…
၁။ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံပေးခြင်းဟာ ..(သူရို့ဟာသူရို့ ကွဲကွဲ ပြဲပြဲ ၁ခါတည်းပါ ချစ်ရယ် နဲ့ပဲပီးပီး)
ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်ပေမယ့် သည် customer တွေ ကိုယ့်ဆီ ပြန်လာတော့မှာ မဟုတ်လို့
ဟော်တယ် အတွက် အကျိုးမရှိတဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်…
၂။အ၀င်အထွက် ဆုံချင်မှ ဆုံမှာပါလေ
ဆိုပြီး သည်အတိုင်း ပစ်ထားလိုက်ခြင်းဟာလည်း ၁၀ရေး ၁ရေး
၉ရေး၁၀၀ ဆုံဖြစ်ခဲ့ရင် ကွိုင်တက်မှာ မလွဲပါဘူး …တက်ရင်တော့
အထက်ကဆိုခဲ့သလို သူရို့ဟာသူရို့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ဟော်တယ်ကိုတော့ ပြန်လာတော့မှာ
၃။ ခုလို service ပေးလိုက်တာ…
ethic အရ ဘာမဖစ်ဘူး ညာမဖစ်ဘူး ထား…
အားပေးအားမြှောက်တာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး
(ကိုယ် အားမပေးလဲ အားပေးတဲ့ဆီသွားမှာကိုးဗျ..)
customer relationship အတွက်တော့ ကောင်းတယ် ဆိုရမယ်ဗျ…
အထက်မှာပြောခဲ့တယ် သန့်ရှင်းရေး ဦးစားပေးတယ်တဲ့…
customer က ဒါကို prefer ဖြစ်လို့လာတယ်
service ကောင်းတယ် …သူ့ privacy ကို အလေးထားတယ်
ဒါဆိုရင် ထပ်လာမှာပဲ ..မိတ်မပျက်ဘူးပေါ့ ..
ကြီးကြီး ကျယ်ကျယ်ပြောရင် customer loyalty ကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့တာပါ…
loyalty အထက်မှာ advocacy ရှိတယ် အဲ့သည့်အပေါ်မှာ evangelism ရှိပါတယ်..
customer sanctification ဆိုတာက ဟိုးအောက်ဆုံးမှာပါ … သူ့အထက်မှာမှ
customer preferenceဆိုတာ ရှိတာ ….
ဆိုတော့ သည်ကေ့စ်မှာ preference ကနေ loyalty stepကို တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့
သူ့ဘွားတော်လာလေ့ရှိတာကို သိလျက်နဲ့ သည်ဟော်တယ်ကိုပဲ စကီလေးနဲ့
လာတယ်ဆိုကတည်းက နည်းနည်းနောနော preference မဟုတ်ဘူး….
သည်လို customer မျိုးနဲ့ မိတ်မပျက်တာ တခုတည်းနဲ့တင် သည်လုပ်ရပ်
မှန်တယ် လို့ ရဲရဲကြီး ပြောပါရစေ ….
ဟဲ ဟဲ နောက်ဆုံးမှာ ကာယကံရှင်ကိုယ်တိုင်ထွက်ပြီးလူလုံးပြနေပြီ..
နောက်ရ၀ူးလေ ….တားက ငယ်ငယ်ရေး ချိတေးတာ …
တားထက် ၁၅နှစ်ငယ်မယ့် ချာတိတ်မလေးဆို အလယ်တန်းကျောင်းသူလောက်ပဲချိဦးမှာ…